Singayitshintsha iSiri ukuba ibe ngumNcedisi kaGoogle ngokwamahemuhemu angenangqondo | IPhone iindaba
Singayitshintsha iSiri ukuba ibe ngumNcedisi kaGoogle ngokwamahemuhemu angenangqondo
Ihlobo lisondela kwaye sele sazi ukuba kuthetha ntoni amarhe kunye namanye amarhe malunga noko iApple kufuneka ikubonise kwiinyanga ezizayo imveliso eza kuba yeyona nto ibalulekileyo kule minyaka idlulileyo eCupertino, ukongeza ekusebenziseni ngoko bhiyozela into eya kuba sisikhumbuzo seminyaka elishumi sokuphehlelelwa kwe-iPhone yokuqala. Kungenxa yoko olu hlobo lwamahemuhemu lungaqhelekanga luthatha amandla amakhulu kunesiqhelo ...
USiri akanguye umncedisi ogqibeleleyo, ngelishwa ukuba ngowokuqala wabancedisi ababoneleli abanako ukuthethelela ukukhula okuncinci ngokuhamba kwexesha. Nangona kunjalo… Ungacinga ntoni ukuba iApple ikuvumela ukuba utshintshe iSiri kuMncedisi kaGoogle kwi-iPhone ezayo? Sicinga ukuba kubonakala ngathi akunakuphikiswa kuwe njengoko kunjalo kuthi.
Amarhe akhutshiwe ukusukela oko Abafana be-Android kunye neminye imithombo yeendaba enxulumene nenkqubo yokusebenza kaGoogle, kwaye esi ayisosizathu sokuba singafuni ukunika inyani kulomnyhadala, kodwa endaweni yoko Akunakulindeleka ukuba inyani kukuba iApple icime owayo umncedisi ukunika ithuba kukhuphiswano oluthe ngqo, ngokusisiseko kuba kuya kufana nokwamkela ukoyiswa okungenakuthelekiswa nanto, kwaye kuyaziwa ngabo bonke ukuba uTim Cook akathandi kuphulukana neepleyiti.
Imithombo yethu ithi icebo kukuvumela uMncedisi kaGoogle ukuba abuye endaweni kaSiri, kodwa kuya kuba ngumsebenzisi ukuba athathe isigqibo phakathi kokusebenzisa uMncedisi kaGoogle okanye uSiri kwisixhobo.
Kodwa oku akuyi kuba yinto ekhethekileyo ye-iPhone 8, kodwa ngokutsho kwehlebe efanayo, oku kuyakusebenza kuzo zombini i-iPhone 7s kunye ne-iPhone 7s Plus. Nangona kunjalo, kufuneka ndinyaniseke kubafundi kwakhona, kwaye kunjalo Oku akubonakali ngathi kunokwenzeka ukuba kuthathelwe ingqalelo inani leminyaka bendilandela inkampani ngokusondeleyo. yeapile yokulunywa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Singayitshintsha iSiri ukuba ibe ngumNcedisi kaGoogle ngokwamahemuhemu angenangqondo
Amarhe angenangqondo ... kangange-iPhone 7s, ethatha ukuqhubekeka kwe- «s» saga njengesiqhelo endaweni yokwenza ukutsiba kube kanye ukuya ku-8.
Andikholelwa ngenxa yesizathu esinye sokuba iimephu zikaGoogle zingasetyenziswa njengendalo, ethi yona ngendlela ibaluleke kakhulu kunezo zika-Apple.
IBeat Stomper ngumdlalo wasimahla kwiVenkile ye App
Ezona zinto zilungileyo ziya kuhamba kunye nawe kweli hlobo